Qarax ka dhacay duleedka caasimadda Libya - Radio Risaala: Somali News Online
Home Caalamka Qarax ka dhacay duleedka caasimadda Libya
Qarax ka dhacay duleedka caasimadda Libya
Ugu yaraan 25 qof ayaa ku dhimatay dhowr kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay me meel u dhaw caasimadda Libya ee Tripoli.
Qaraxa waxaa uu ka dhacay magaalada Gharabouli, oo ku taalla duleedka caasimadda, halkaasi oo maalin ka hor rabsahdo ay ka dheceen.
Dad rayid ah oo hubeysan ayaa lagu soo warramayaa in ay dagaal la galeen koox maleeshiyaad ah oo ka yimid magaalada Misraata, kaddib muran dhex-maray labada dhinac.
Maleeshiyaad aan cidna ka amar qaadan ayaa inta badan maamula dalkaasi Libiya, iyadoo maamullo is diidan ay dalka geliyeen khalkhal.
Previous articleKuuriyada Woqooyi oo tijaabisay gantaallo hor leh
Next articleDHAGEYSO: Soomaaliya iyo Kenya oo ka wada hadlay xoojinta amaanka Labada dal